Two days workshop for Outcome Based Education (OBE) was held in MTU organized by MTU and delivered by Myanmar Engineering Council (MEngC) on 25/26 July 2018. Dr. Charlie Than (Chairperson of MEngC), Dr. Zaw Min Aung (Chairperson of EEAC) and Dr. Mya Mya Oo delivered about the Outcome Based Education, FEIAP Engineering Education Guidelines, Assessment Process, CQI Process and Credit Analysis. The representatives of Technological Universities from Upper Myanmar attended...
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွက် သင်ကြားရေးဌာနများ၊ စီမံဌာနများ၊ စာပေဌာနများ အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးဆုများ၊ အမှုထမ်းများအတွက် စံပြဆု၊ ဝန်ထမ်းကောင်းဆု၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးဆုများပေးအပ်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ (Volunteer)အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၁၁.၆.၂၀၂၀(ကြာသာပတေးနေ့) နံနက်(၁၀)နာရီတွင် တက္ကသိုလ်ပင်မဆောင်စုဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ Awarding Ceremony for Academic,Teaching staff and Engineering Departments For academic year (2019-2020) Mandalay Technological University recognized the academic staff,administration and engineering department who has contributed to socitywith best performanance,inspiration,good morality has sacrified their life for the development of university and beyond. Mandalay Technological University is acknowledged to all rewordees by giving the...